बिरालो ब्रेडिंग, माइल ओह्ये र बाँदरको मुट्ठी Martech Zone
भर्खर यो ईमेल प्राप्त भयो:
मैले कसरी ब्लग इन्डियानामा डगलसको कुरा गरेको सुनें SEO मरेको छ र कीवर्डहरू पहिले जस्तो महत्त्वपूर्ण थिएनन्। तपाईं कसरी यसलाई प्रभावी ढंगले विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? तपाइँको लिन मा रुचि हुनेछ।
नोट: जब किवर्डहरू छैनन् as महत्वपूर्ण ... सही कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग गर्न यो अझै महत्त्वपूर्ण छ। खोजशब्द अनुसन्धानमा हामी हाम्रो ग्राहकहरूको साथ धेरै समय खर्च गर्दछौं। तपाईले सहि किवर्ड (र हिज्जे) को उपयोग गर्नुपर्दछ बिरालाको प्रजनन बिरुद्द बिराउ ब्रेटि was्ग गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा देखाउनको लागि मैले दर्शकहरूसँग साझेदारी गरेको स्लाइड। यो हो बिरालो ब्रेडिंग:
ग्राहकहरूलाई बुझ्न कि कीवर्ड उपयोग छैन महत्वपूर्ण को रूप मा बढी गाह्रो छ। जबकि खोजी ईन्जिनहरूले उनीहरूको एल्गोरिदममा निरन्तर परिवर्तन गर्दछ, कम्पनीहरूले स्वीकार्न धेरै ढिलो हुन्छ। एसईओ उद्योग भित्र, हामी होशियार आँखा राख्छौं र तुरुन्तै परिवर्तनहरू लागू गर्दछौं ताकि हाम्रा ग्राहकहरू खोजी गर्न सक्नेछन् र प्रतिस्पर्धा भन्दा अगाडि नै रहन सक्नेछन्। यदि तपाइँका ग्राहकहरूले तपाइँलाई विश्वास गर्दैनन् भने, म केही युक्तिहरू सिफारिस गर्दछु।
पहिले, बाट सल्लाह लिनुहोस् गुगल। माईल ओह्ये Google मा एक खोज उत्पाद प्रबन्धक हो र मार्केटर्सले गर्ने सामान्य गल्तीहरू औँल्याउँछ जब सर्च इन्जिन अनुकूलनको लागि आउँदछ। तपाईंले त्यो याद गर्नुहुनेछ किवर्ड कुराकानी मा छैनन्! उनीहरूले गरेका गल्तीहरू मूल्य प्रस्तावको अभाव हो, कुनै विभाजित दृष्टिकोण छैन, workarouts को प्रयोग गरी, SEO प्रवृत्तिमा ध्यान नदिई र ढिलो पुनरावृत्ति।
ठीक छ ... गुगलले भन्यो र तपाईंले यसो गर्नुभयो, तर तपाईंको ग्राहकले अझै विश्वास गर्दैन। अर्को माथि छ बाँदरको मुट्ठी दृष्टिकोण A बाँदरको मुट्ठी एउटा डोरीको अन्तमा बाँधिएको विशेष गाँठ हो। नौसेनामा जब जहाजहरू लंगरमा आउँथे, तपाईंले बाँदरको मुट्ठी किनारमा फालिदिनुहुनेछ जहाँ कसैले यसलाई समातेर र डोरीमा तान्नेछ। त्यो डोरीको अन्तमा विशाल लch्गाch डोरी थियो। तपाईं विशाल डोरी फ्याक्न सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईं सानो डोरीबाट सुरू गर्नुहोस्। तपाईंको क्लाइन्टलाई बाँधको मुट्ठी फाल्नुहोस् उनीहरूलाई ठूला डोरी फाल्ने प्रयास गर्नु अघि।
तिनीहरूसँग एक परीक्षण सेट अप गर्नुहोस् जहाँ तपाईं द्वारा १० अवस्थित ब्लग पोष्टहरू अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ कुञ्जी शब्दहरू ठीकसँग प्रयोग गर्दै। १० पोष्टहरू फेला पार्नुहोस् जहाँ तपाईं श्रेणीकरण गर्दै हुनुहुन्छ तर दिइएको कुञ्जी शव्दको लागि राम्रो श्रेणी छैन। कुञ्जी शब्दहरू अप्टिमाइज गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई शीर्षकहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्, छविहरू फेला पार्नुहोस् जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई वैकल्पिक पाठ ट्यागमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कीवर्डमा घनत्व सुधार गर्न तपाईंसँग पाठमा to देखि men उल्लेख छ। समयको ट्र्याक राख्नुहोस् जुन तपाईं ती पोस्टहरूलाई अनुकूलित गर्नमा खर्च गर्नुहुन्छ, weeks हप्ता कुर्नुहोस् र तपाईंको एनालिटिक्समा नतिजाहरू मापन गर्नुहोस्।
एक परीक्षण सेट गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ १० नयाँ ब्लग पोष्टहरू लेख्नुहुन्छ जुन बाध्यकारी हुन्छ। उत्तम इमेजरी प्रयोग गर्नुहोस् - सायद ग्राहकहरूका फोटोहरू वा केहि स्टक छविहरू जुन सुन्दर छन्, शीर्षकहरू लेख्नुहोस् जुन प्रलोभनमा लेख्न अधिक लेखिएको छ, र ग्राहक कथाहरू वा सल्लाह पोष्टहरू लेख्नुहोस् जुन तपाईंको ग्राहकहरूलाई सहयोग गर्दछ। कीवर्ड प्रयोगलाई वेवास्ता गर्नुहोस् ... तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुहोस्। काम ट्विटर, फेसबुक, Google+, लिंक्डइन, StumbleUpon र जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ कहीं साझा गर्नुहोस्। केही कुराकानीमा प्रहार गर्नुहोस्। तपाईले बिताउनु भएको समय ट्र्याक राख्नुहोस्, weeks हप्ता कुर्नुहोस् र तपाईको एनालिटिक्समा नतीजाहरू नाप्नुहोस्।
तपाइँको ग्राहक र सामग्री मा केन्द्रित गरेर सट्टा कुञ्जी शब्दहरूको, म विश्वस्त छु कि तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि दोस्रो विकल्पले हरेक पटक पहिलो विकल्प भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ। म कसैलाई अप्टिमाइज गर्न रोक्न सल्लाह दिइरहेको छैन, मेरो कुरा यो हो कि जब तपाइँ खोजी ईन्जिन अनुकूलनको मेकानिकमा ध्यान केन्द्रित गर्न रोक्नुहुन्छ र यसको सट्टामा, तपाइँको प्रयासलाई महान् सामग्री र सामग्रीको प्रमोटनमा राख्नुहुन्छ - तपाईं प्रत्येक पटक जित्नुहुनेछ!
क्रॉलरहरू र बोटहरूले तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू खरीद गर्दैनन्, मान्छेहरू गर्छन्। जब तपाईं आफ्नो शैलीलाई क्रॉलर वा बोटसँग कुरा गर्न परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईं ग्राहकहरू गुमाउनुहुनेछ।
टैग: खोजशब्दकुञ्जी शब्द प्रयोगmaile ohyeबाँदर मुट्ठीखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओ